Maxweyne cabdi nuur biindhe oo u ololaynay xil uu ka qabto dawladda federaalka, muxuu yahay xilkaasi? | warar sugan – Herbal Remedies for Acid Reflux
Sida ay xaqiijiyeen ilo-xog ogaal ah oo ku sugan magaalada Muqdisho waxaa muddooyinkaba olole ugu jiray sidii uu xil uga qaban lahaa dawlada Federaalka Soomaaliya madaxwenaha dawlad goboleedka Khaatumo maxadweyne Biindhe.
Ilahan xog-ogaal ahi waxay intaasi ku dareen in muddooyinkan ugu danbeeyey uu biindhe aad uga agdhawaa madaxtooyada Villa Somalia oo uu dhawr jeerna la kulmay madaxda dawlada federaalka Soomaaliya isaga oo u ololeynaya sidii uu u noqon lahaa Safiir Ama Qunsul isaga oo waliba aad u quudaraynay in uu Sucuudiga ka noqdo Qunsul.
Biindhe oo ku sugnaa sanad iyo dheeraad magaalada Muqdisho oo aan cag dhigin deegaankii madaxweynaha looga doortay mudadaasi ayaa dadweynaha iyo shacabka Khaatumo aad isu weydiinayaan wax uu ka qabanayo Muqdisho iyada oo hawlo badani qabyo ka yihiin maamulka Khaatumo aadna loogu baahi qabo in uu goob joog ka noqdo hawl maalmeedka.
Xilka golaha madaxtooyada oo markii loo magacaabayey dadweynaha khaatumo aad ugu hanweynaayeen Biindhe ayaa hadda muujinay dareen ah in aan xilkani ahayn mid cid gooni ahi garabku siinayso , hasa yeeshee yahay xil shacabka Khaatumo ay ka dhawrayaan in waxloogu qabto, iyada oo aanay maanta danta shacabka Khaatumo ku jirin Safiir iyo Qunsul loo diga rogto.